Inkolo yobuhle besifazane yaqala amakhulu eminyaka ngaphambi kwenkathi yethu. Nganoma yisiphi isikhathi, owesifazane wazama ukuba mnandi, efika ngamasu amasha, esebenzisa amaphethini nemidwebo ebusweni nasemzimbeni wakhe. Ngakho kwakukhona ukwakheka, isici esivele sidingeka sesithombe sowesifazane wanamuhla. Ukuze wenze izimonyo ezifanele, kunezimiso eziningana okudingeka wazi futhi usebenzise ngobuchule. Umthetho wokuqala yizinyathelo ezilandelanayo zokusebenzisa izimonyo, umthetho wesibili - konke kufanele kube ngokulinganisa. Okulandelayo kufanele kuphawulwe:
• Ngaphambi kokuba usebenzise ukwakheka, isikhumba kufanele sihlanzeke;
• Khetha imikhiqizo yezimonyo ezifanele ngokusho kwesikhumba sakho;
• Uma ukhetha izimonyo, hlola usuku lokuphelelwa yisikhathi.
Ngakho-ke, esikhumbeni esihlanzekile kudingeka usebenzise umswakama wokukhanya. Lokhu kuyoba isisekelo esihle sesisekelo esizohlala isikhathi eside futhi silondoloze isakhiwo sayo. Okulandelayo, udinga ukusebenzisa ipenseli-proofreader, okuzosiza ukugubha amaphutha amancane esikhumba, amabala, ama-patches avuliwe.
Njengesizathu sokwenza izimonyo yisisekelo. Kumele kukhethwe ngokusho kombala nohlobo lwesikhumba. Isikhumba samafutha afanelekayo yizikhwama zamakhemikhali, ukuze kube nesisekelo esomile nesilahlekayo esimweni sekhrimu elukhulu. Inketho ekahle ukuthi ube nemibala emibili yesisekelo sokuhlwa kanye nemini yokwenza, ngokuya ngokukhanyisa. Uma usebenzisa i-substrate, kubalulekile ukufeza ngisho nezwi ngaphandle kwemigqa kanye namathanga. Nakuba, uma ubuchoko bakho bude, isikhumba asikho izindawo ezibonakalayo nokuvuvukala, khona-ke ungenza ngaphandle kwesisekelo.
Isinyathelo esilandelayo ekusebenziseni izimonyo sisebenzisa i-powder. Ekuqaleni kosuku kufanele usebenzise i-powder okuxekethile, okuzosiza ukukhipha ukhilimu obusweni ebusweni bakho. Qinisekisa ukuthi i-powder yabekwa flat, ngaphandle kokugoqa emaphethweni esikhumba. Ngesikhathi sokwenza usuku lungalungiswa ngosizo lwe-compact powder.
Manje ungaya emanzini. Susa izinwele ezingaphezulu ngokweqile, kodwa khumbula ukuthi awukwazi ukuphenya amashiya phezulu. Letha ishiya lakho ngombala ngezwi eliphansi kunombala wezinwele kumashiya. Umzila weshiya kufanele ube bushelelezi futhi uphumelele. Kungcono ukuletha amashiya ezinkethweni ezincane ezithambile. Khona-ke umugqa uzoba wemvelo ngokwengeziwe.
Khona-ke ungabheka amehlo. Lesi yisigaba esibaluleke kakhulu sokusebenzisa izimonyo. ngosizo lwamathunzi kungenzeka ukuthi ushintshe ngokuphawulekayo ukuma kwamehlo. Khumbula ukuthi imibala ekhanyayo yenza izinkophezelo zikhuphuke, kuyilapho amathoni amnyama enikeza amehlo "umphumela wokujula". Okokuqala kudingeka usebenzise ithoni eyisisekelo yamathunzi amajwabu amehlo, sebenzisa umthunzi omnyama ekona langaphandle leso, bese usebenzisa shades of umbala weparele ngaphansi kwamashiya. Kumele kukhunjulwe ukuthi umbala ogqamile wezithunzi uheha amehlo, lapho, kulokhu, kufanele kube okuphelele. Umzila wamehlo ungagcizelela futhi ngepensela, embala kuyoba mnyama kunombala wezithunzi ezisekhoneni lamehlo, noma ngesimiso esifanayo sombala. Ngejwabu leso elincane, kungcono ukungasebenzisi i-eyeliner. Ngale njongo, ipensela ihambisana kahle.
Isigaba esilandelayo sokusebenzisa i-makeup yi-mascara. Sebenzisa ama-2 ama-mascara e-eyelashes, uwavumele ukuba omile, bese ungasebenzisa enye ingqimba. Ukwandisa amehlo, ungabeki i-mascara emilonyeni yejwabu leso eliphansi.
Ungalungisa ubuso ngosizo lwamahloni. Umbala ukhethwa ngokusho kombala wephutha lakho lemvelo. Ngenhlanhla, into esemqoka akuyona ukuyiqeda, kepha ukuyisebenzisa kangcono ngebhayisikili enkulu nxazonke.
Isiteji sokugcina yilona ukwakheka kwezindebe. Kungcono ukuthi izindebe ezincane zisebenzise ipensela yomjikelezo wezindebe. Lokhu kuzobanika ivolumu engaphezulu. Ukuze kwesikhashana ukwakheka kungcono ukusebenzisa lip isicwebezelisi, ngoba kusihlwa lipstick make-up of tones ecacile kufanelekile.
Yilokho konke. Kodwa ungakhohlwa ukuthi ngaphambi kokuya kumbhedeni wokulala kufanele ugezwe ukuze uvimbele ukuguga kwesikhumba ngaphambi kwesikhathi.
UKsenia Ivanova , ikakhulukazi indawo
Imfihlo yesikhumba esihle: umbusi wezethusi uLaura Mercier
Indlela yokwenza izimonyo Zonyaka Omusha omuhle
I-Nutcracker noRose: iqoqo le-makeup le-MAC Nutcracker elimnandi
Iholide eParis: iqoqo lokuhlobisa Lancome Paris En Rose
Ukuhlola okubonakalayo ezinganeni ezingaphansi konyaka owodwa ubudala
Ukupheka kanye namathiphu ukupheka khachapuri
I-design yangaphakathi ekhululekile
I-Baked French Toast eneBhanana
I-Sauce yilokho okuzokwenza isidlo sakho sezinyamazane sikhetheke
Ungabhaka kanjani ikhekhe elimnandi ku-multivark: iresiphi yesinyathelo ngesinyathelo ngesithombe
Izingoma kanye neziqu ze-Shrove NgoLwesibili yizingoma zomculo ezihlekisayo zezingane nabantu abadala, isosha nomculo. Izinkondlo zezingane ne-carols zeviki le-Pancake ne-Forgiveness ngeSonto
Iklabishi isaladi ebusika
Ikhekhe le-Chocolate le-Irish